China Multifunction Cavitation Vacuum Roller Velashape Slimming Machine ụlọ ọrụ na ndị na -ebubata ya Nubway
Multifunction Cavitation agụụ rola Velashape Slimming Machine
NBW-VSIII na-ejikọ teknụzụ anọ dị iche iche gụnyere IR (infrared), Bi-Polar RF (ugboro redio), oghere oghere na nhazi anụ ahụ, na-eji oghere pulsed na rollers ịhịa aka n'ahụ. Ngwakọta nke teknụzụ IR na oghere jikọtara na -eme ka ikpo ọkụ dị ukwuu na anụ ahụ jikọrọ ọnụ gụnyere septae fibrous, nke n'aka nke ya na -akwalite mmụba na ntinye collagen na metabolism cellular mpaghara, nke na -ebute mbelata mpaghara nke adịghị ike na olu. Ntughari anụ ahụ ọzọ nke Vela na -akpata mmụba ozugbo na mgbasa na ọwa mmiri lymphatic, ihe abụọ dị mkpa maka ọdịdị akpụkpọ ahụ dị mma.
Na -agwakọta teknụzụ ise dị iche iche
V-udi na-agwakọta teknụzụ ise dị iche iche gụnyereIR (laser infrared), Bi-polar RF, rolle ịhịa aka n'ahụ, oghere na cavitation cault. Nchikota nke lR, oghere na RF n'ihi ikpo ọkụ nke sel abụba, anụ ahụ jikọrọ ọnụ ya na eriri collagen dị n'okpuru. Ụdị ikpo ọkụ a na-ekpo ọkụ nke ọma na agụụ na-akpali uto nke collagen na elastin ọhụrụ na nke ka mma nke na-ebute mbelata mpaghara adịghị ike akpụkpọ ahụ, olu ahụ yana mmụba zuru oke na nhazi akpụkpọ ahụ na udidi. ihe abụọ dị mkpa maka nhazi ahụ akpụkpọ ahụ dị mma.
INFRARED VOLUUM ROLLER RF HANDLE (BIG)
Eji ya maka iwepụ cellulite
akpụkpọ anụ na -agbatị afọ, buttocks, úkwù, apata ụkwụ na azụ.
INFRARED VOLUUM ROLLER RF HANDLE (Obere)
Eji ya maka iwepụ cellulite na ikpa anụ ahụ na ogwe aka, ụmụ ehi na azụ.
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ RF
Ejiri isi isi ọgwụgwọ atọ dị iche iche, ejiri ya mee ka akpukpo ihu na olu sie ike na mbuli elu, ntachi anya anya, akpa anya na ọgwụgwọ okirikiri gbara ọchịchịrị.
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
Na -agwakọta oghere na ultrasound, maka mbelata abụba mpaghara n'ime oghere, isi, apata ụkwụ na mpaghara ndị ọzọ.
Ejiri aka na-eji ihuenyo mmetụ 3.5 inch, enwere ike ịhazigharị ihe nlele ahụ site na aka n'oge ọgwụgwọ, nke dabara adaba maka ọrụ.
Teknụzụ 1.5 n'otu igwe
2.High ndidi chọrọ maka cellulite & ọgwụgwọ contouring ahụ
Nsonaazụ ọmarịcha naanị na nnọkọ 1-3
Ahụmịhe onye ọrụ etinyerela na ngwanrọ ọnọdụ ọhụụ
Nke gara aga: Super Skin Rejuvenation IPL SHR OPT igwe na -ewepụ ntutu
Osote: Ọkpụkpụ dị jụụ 4 Cryo na -ejikwa Cyolipolysis Slimming Fat Ifriizi Ibelata Ibu